थाहा खबर: 'मुलुकले सही नेतृत्व नपाउँदा जनतालाई सास्ती भयो'
प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी बाटो रोजे
विराटनगर : पछिल्लो समय संसद् विघटन भएपछि नेपाली राजनीतिमा कालो बादल मडारिएको जस्तो भएको छ। सँगसँगै केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमको समस्याले प्रदेश सरकारलाई पनि छोएको छ।
एक पक्षले अर्को पक्षका नेतालाई कारबाही गर्नेको होडबाजी चलिरहेको छ। निवर्तमान मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग थाहाखबरकर्मी सुजता लिम्बूले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
केन्द्रमा भएको राजनीतिक गडबडीले प्रदेशमा किन असर पर्‍यो?
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै नेतृत्‍वमा अविश्वासको प्रस्तावमा किन हतार गर्नुभयो?
नेकपा आफैँ सरकारमा छ। यो रडाकोले तपाईंहरू आफैँ सत्ता स्वार्थमा लाग्नुभए जस्तो लाग्दैन? जनताको मतको अपमान गरेजस्तो लाग्दैन?
प्रतिनिधिसभा पुनर्गठनको मुद्दा अदालतमा छ। मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ या संसद् पुन:स्थापना भएर सरकार बन्छ?
अदालतले सच्याउँछ सच्याउँदैन भन्ने समग्र देशव्यापीले हेरिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले गलत राजनीतिक कदम चाल्नुभयो। यो राजनीतिक कदम अदालतले बदर गर्छ। संसद् पुन:स्थापना भएर देश पुरानो स्थिरता प्रकृयामा अगाडl बढ्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ।